I-Rob 's - Ikamelo - I-Airbnb
I-Rob 's - Ikamelo
Ikamelo lokwamukela esakhiweni esisha esitholakala kalula e-Tel Aviv. Ikamelo linombhede ontofontofo kakhulu kanye nedeski elincane lokubhala/le-laptop. Ifasitela elikhulu egumbini livumela ukukhanya kwelanga okwanele e-.
Kusuka endaweni eyisicaba, kuwuhambo lwezinyawo olufushane oluya e-Rothercial Blvd., kanye ne-promenade yabantu abahamba ngezinyawo eyakhiwe esihlahleni, enye yezitaladi eziyinhloko nezithandwa kakhulu kuleli dolobha, uzothola lapha ezinye zezindawo zokudlela ezihamba phambili zase-Tel Aviv, izitolo zekhofi namaphabhu. Iyisicaba kanye nemigwaqo embalwa kude ne-Tel Aviv 's trendy Florentine Neighborhood (ene-vibe yayo ye-hipster, amathilomu e-bohemian nama-bar ayo aphithizelayo), i-Levinsky Market kanye nokuhambahamba okufushane ukuya endaweni engumakhelwane we-Neve Tzedek, enye yezindawo ezindala kakhulu zedolobha futhi ibhekwa ngabaningi njengenye yezifunda ezihamba phambili zase-Tel Aviv.
Indawo eyakhelene ingenye yezindala kunazo zonke zase-Tel Aviv futhi iphakathi nokubhekana 'nokuzalwa kabusha' okusheshayo. Njengoba izakhiwo ezindala 'ezivikelekile' zibuyiselwa eceleni kwezakhiwo ezintsha, ziheha abantu abaningi abasebasha kuleyo ndawo.
Ngiyakujabulela ukubungaza futhi ngibheke phambili ukuhlangana nabantu abasha abavela emhlabeni jikelele. Ngizama ukwenza engingakwenza ukuze isivakashi ngasinye sizizwe sikhululekile ngangokunokwenzeka. Ngiyakujabulela ukunikeza usizo uma izivakashi zidinga noma yini noma uma zinemibuzo ngedolobha.
Ngiyakujabulela ukubungaza futhi ngibheke phambili ukuhlangana nabantu abasha abavela emhlabeni jikelele. Ngizama ukwenza engingakwenza ukuze isivakashi ngasinye sizizwe sikhulul…